Oz Amahhotela Side Premium Ihhotela 5 * (Turkey / Side) - izithombe kanye nokubuyekeza
Coast Turkey iyona uya khona intandokazi izakhamuzi Russian. Futhi izakhamuzi zethu nabo bakhangwa amanani aphansi hhayi kuphela yokuhlala kanye nezinsizakalo, kodwa futhi amabhishi amahle, ezikhangayo zomlando wemvelo, kanye izihambi bendawo. Eqinisweni, izindleko ukuzilibazisa ogwini Turkish is amukeleka kuze lonke imikhakha noma izihambi, bese ngisho amahhotela Class "de india" ukuhlala amanani ngempela kunengqondo. Ngokwesibonelo, i-imali efanayo (3368 ruble ubusuku ngabunye), kufanele akhokhele ahlala ehhotela ezintathu inkanyezi e-Italy noma Greece, ungakwazi uhlala aphambili ehhotela Turkish, ezifana Oz Amahhotela Side Premium (Side / Turkey). Ngesikhathi esifanayo isevisi high quality, akunakwenzeka ukuba ukuhlangabezana namanye amazwe Mediterranean. Yiqiniso, ezinye zokungcebeleka Turkish athandwa kakhulu kunamanye. Nokho, cishe yonke ungathola inhlanganisela ephelele "intengo-izinga". Sinjalo isimo kuleli yokungcebeleka ka Side, esemgwaqweni ngaphezu ehhotela Oz Amahhotela Side Premium. Wayelethwa postorit muva futhi linikeza izivakashi svezheotremontirovannye efulethini nge design amahle ngiphele ocebile. Plus timo letifanele.
Side - omunye zokungcebeleka engcono eningizimu Turkey
Selim enhlonhlweni ingenye zokungcebeleka liveliest we ugu lwaseningizimu. Lokhu edolobheni elincane elibizwa ngokuthi Side. Kuyinto amakhilomitha 75 kusukela Antalya. ukukhangwa yakhe izivakashi ukuthi akuyona nje enhle kakhulu elingasolwandle resort, kodwa futhi ezivulekile Museum esiyingqayizivele. Phela, nansi main indawo umlando nemivubukulo of Turkey, okuyinto ngaphansi kwesivikelo Ministry of Culture.
Izici iholide e Side
Njengoba sekushiwo, izinto resort zithandwa kakhulu yizivakashi ezibuka amazwe, hhayi kuphela isiRashiya, kodwa futhi amazwe CIS, eYurophu nakwezinye amazwekazi. Ngakho-ke, abaningi amahhotela Side ngenkathi okusezingeni eliphezulu zikhona njalo esuke isigcwele. Iningi eziyinkimbinkimbi ehhotela itholakala entshonalanga yokungcebeleka, lapho kukhona emabhishi amahle anesihlabathi. Abathandi umndeni iholide okuphumuzayo endaweni ngeke uthanda, kodwa amahhotela, okuyinto zitholakala emaphethelweni resort, abantu kancane, futhi ngenxa yalokho ethulile. Asemazingeni ehhotela Oz Amahhotela Side Premium, izithombe ongawabona kulesi sihloko, kuyinto ehluke abasha ngempela ezolile. The yokungcebeleka lolwandle inikeza ezihlukahlukene imisebenzi amanzi: ukushushuluza, Awe-Parasailing, ukuntweza phezu kwamagagasi, njll ...
Uyithola kanjani ehhotela?
Uma ukhetha uphumule "5 * Premium", esemgwaqweni resort of Side, kufanele fly lokuqala ukuya esikhumulweni sezindiza Antalya bese ngebhasi ukuya Manavgat. Kodwa basuka lapho baqhubekela dolmushe noma ibhasi ungathola UHLANGOTHI, kanti eyesibili kuwusizo kakhudlwana, ngoba ilungelo eceleni kwehhotela lethu kukhona lapho kupakwa lolu hlobo ezokuthutha. Nokho, uma uthanda induduzo yakho, wena bengitawu esikhokhela kangcono lapho uthenga ukudluliswa ukuvakasha kwehhotela lethu futhi ungacabangi mayelana izindlela zokuthutha abantu. Uma ungumuntu esikhumulweni sezindiza, uzothola kummeleli opharetha uhambo noma isisebenzi ehhotela Oz Amahhotela Side Premium.
Lokhu omangalisayo ehhotela eziyinkimbinkimbi lavulwa ngo-2014. Ihlanganisa ngempela endaweni enkulu 18,000 square metres futhi itholakala amamitha 900 nje esuka ogwini lolwandle. Ihhotela Green ngeke uqambe, ngoba utshani ziyatholakala kuphela umugqa kocingo, futhi amaningi ala masimu kuhlala elikhulu yokubhukuda. Eduze kwalo zitholakala sunbeds, baphathe nezambulela, ilanga ithala futhi pool ibha, lapho ekuseni kakhulu kuze kube sebusuku, ungaba isikhathi nice ingilazi cocktail, zama esiphundu ice cream futhi amaswidi zaseMpumalanga. Ukuze bavale isikhala yokuntuleka izitshalo, izimbali nezihlahla, ihhotela bekulokhu engadini kanzima. Lokhu kwenziwa Sibonga kungenzeka ukuba amasundu nezinye izimila ezingavamile ezikhulayo izimbiza ezinkulu. Ngokuqondene ehhotela ngokwayo, it siqukethe isakhiwo main ne ezimhlophe kwemibhoshongo indaba nesikhombisa, eyenziwe isitayela Oriental, futhi ezimbili kanye ezintathu storey izindlu eziningana, alinikela spa, pool endlini, sauna, TV club, nokunye. D. ingaphakathi izakhiwo, njengoba kufakazelwa Izibuyekezo eziningi izivakashi ehhotela, ejabulisa iso nge izixazululo zayo ezithakazelisayo.
Oz Amahhotela Side Premium 5 * (Side / Centre), njengoba usuvele waqonda, akuyona ngolokuqala futhi ogwini yesibili. Nokho, it has lolwandle ayo yangasese, lapho lolwandle amabhasi ekhethekile suka njalo. Ngaphezu kwalokho, ebhishi engafinyelelwa kwemizuzu engu-10 ngo-ukuvakasha landscaped kalula. Lapha kusuka Antalya sezindiza ehhotela - 45 km. Idolobhana kakhulu efanayo Side kuyinto km 15 kusukela ehhotela. Eceleni kwakhe kukhona izimakethe, izitolo kanye nezitolo ezinkulu lapho unga kahle otovaritsya.
Ihhotela Oz Amahhotela Side Premium 5 454 a indawo yokuhlala ntofontofo kule mikhakha elandelayo, okuyilezi: zamagumbi Standard 35 sikwele. m (izinombolo 375); umndeni nendawo ethize 45 sq. amamitha (izinombolo 16); Suites umndeni, ne endaweni inkudlwana (48 sq metres.) futhi aqukethe amakamelo amabili okulala, Suites ivulekile (55 sq. amamitha), ehlanganisa egumbini lokuphumula futhi lokulala (amakamelo 15) no-5 amakamelo kubantu abakhubazekile kanye Ubukhulu efanayo nomgomo. Kungakhathaliseki isigaba izinga lenkonzo kuyafana yonke indawo.
Igumbi ngalinye has a emi phezulu ebheke pool, ezintabeni noma amahhotela angomakhelwane. Ezinye zokuhlala we kwakugqamuka futhi ungabona kolwandle. Zonke anemisila nekamelo lokugezela enhle bonke okugeza ezidingekayo futhi zokugeza kanye hairdryer. Of imishini emakamelweni kukhona LCD-TV, i-TV satellite, Wi-Fi (mahhala), Ekupholiseni (central), ucingo, isiqandisi, mini-bar iziphuzo. Kukhona ephephile eziyigugu. Zonke amakamelo bahlanza kahle nsuku zonke (kungakhathaliseki amathiphu), ushintsho zelineni kanye amathawula Njalo ngemva kosuku olulodwa, okungukuthi, katsatfu ngeliviki.
Ezokudla Oz Amahhotela Side Premium (Turkey / Side)
Njenganoma amahhotela kakhulu esigabeni "Deluxe" coast Turkish, ukudla ihlelwe uhlobo "ultra nke okufakayo", okusho ukuthi izivakashi usuku lonke Ungasebenzisa amasevisi zokudla nezindawo zokudla elise kokubili ngaphakathi ehhotela kanye echibini, futhi ogwini mahhala, noma kunalokho, zonke emananini. Main isikhathi yokudla, kuthiwa uma kusetshenzwe buffet izivakashi, yilesi: 7.00 (B), 10.30 (zebhrantshi), 12.30 (ukudla), 19.00 (ukudla) bese 24.00 (ukudla ngasekupheleni). Kodwa lokho akuyona yonke: emini isidlo ukukhanya noma dessert (ice cream 10 ekuseni kuya ku-11 ntambama) nge iziphuzo ingatholakala zonke amathilomu kubekwe phakathi eziyinkimbinkimbi futhi ebhishi. Kungcono uthi mayelana Ihhotela Oz Amahhotela Side Premium libuyekeza holidaymakers. Bathanda namakhono abapheki, futhi imenyu ezihlukahlukene, futhi isevisi kanye izinga imikhiqizo. Izakhamuzi ezisenyakatho bathandile ikakhulukazi nobuningi bezithelo nemifino. abathandi Inyama zibabaza izitsha ezihlwabusayo enziwe iwundlu, yemvu, nezinhlobo eziningana nezinyoni nezinhlanzi. Kanye ngesonto yokudlela uthwala "Turkish Ebusuku" lapho izivakashi Ungazama ezihlukahlukene izitsha Turkish, ulalele umculo kazwelonke bese ubuka esiswini dancing zonke nokunye. D. Ngaphezu yokudlela main, ihhotela Oz Amahhotela Side Premium ezisebenza "a la Carte" ukukhonza cuisine Chinese futhi Italian.
Ingqalasizinda kanye Nemisebenzi
Ihhotela izici kokubili amaslayidi ongaphandle kanye linezingxenye for Jacuzzi kanye amachibi okubhukuda asendlini nge evuthayo. A beauty salon kanye ikamelo massage, spa (kwendibilishi), sauna Hammam. Ihhotela has ngentela imoto futhi yokupaka khulula, exchange, isitoreji umthwalo, emakethe, isikhungo sezokwelapha, zokuhlanza owomile, ayina kanye ikamelo ilondolo, igumbi cinema, indawo yokwamukela izivakashi, snek- juice ibha, udladla nabanye. Ngokuvamile, izivakashi uthi, ingqalasizinda ngaleso isikhathi.
Leli hhotela ephelele hhayi kuphela ukungcebeleka kodwa nezalo izingqungquthela, njengoba kungekho ihholo elikhulu, eyenzelwe ezihlukahlukene nezethulo, workshop, seminar, njll Njll, kanye ukuhlangabezana amakamelo, isikhungo ibhizinisi ukufinyelela inthanethi wireless, a imishini yokukopisha, iphrinta, isithwebuli kanye m. p.
Ukuze abahambi abangakwazi ukucabanga ngokuphila kwami ngaphandle imisebenzi kwezokuzijabulisa, uphumule kusihlwa ukuzijabulisa, ema-disco, imibukiso, "nobusuku obungamashumi amane-Turkish". By endleleni, ngoba bonke labo abafisa ukuhlela Uhambo e Side, baphi Amanxiwa omuzi wasendulo kanye izikhumbuzo eziningi ezithakazelisayo yezakhiwo endaweni ezungezile. Enye Ukukhangwa okungokwemvelo ethandwa kakhulu Manavgat Falls. Eceleni inemiphumela eminingi izinhlanzi zindlu lapho ungakwazi nambitha okujabulisa Culinary labapheki wendawo, kanye ujabulele umsindo wamanzi ovela. It ihlose ukuthola yilowo nalowo yafika yema e Side.
Kodwa kubathandi amaholide esebenzayo kanye nezemidlalo esizeni Oz Amahhotela Side Premium izinkantolo tennis nge ebusuku ukukhanyisa futhi imishini eziqashisayo (Awamarakhethi futhi amabhola), ahlinzekwa table tennis, Ringo, kyokushin kwelitshe kanye imicibisholo. A isikhungo imfanelo (Ukuvivinya umzimba ngendlela, isinyathelo, aqua-aerobics, umdanso izifundo) kanye ejimini, ensimini ukuze ukudlala ibhola lezinyawo, mini-igalofu nokunye. D. Izivakashi uyajabula kakhulu ukuthi kube yinto-spare time sakho.
Ukuze beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni abasebasha, kodwa nakubazali bayo, ukuphathwa ehhotela uye walungisa amasevisi elandelayo: playroom, izithombe izingane nokugada (icala), izingane club, disco mini, imibhede akhethekile izihlalo zabakhubazekile, pool zezingane amaslayidi, a inkundla yokudlala kanye sandbox, highchairs e yokudlela, nokunye. d. ngakho-ke, iningi labo womlimi ehhotela, abonisa ukuthi le yindawo emangalisayo kuze kube iholidi ngaphambi umndeni.
Beach Side Premium Ihhotela 5 *
Njengoba sekushiwo, ihhotela has sandy beach ayo, esemgwaqweni 900 metres kusukela eziyinkimbinkimbi. Yena anguye ifakwe konke okudingekile: eydijithali amakamelo, izihlambi, izindlu zangasese. Izivakashi nazo enikeziwe izambulela, emphemeni izihlalo, omatilasi kanye amathawula, konke mahhala. Phakathi kwamanzi kanye ebhishi imisebenzi ukuthi ayatholakala for amaholide - Ukushushuluza amanzi, ski, ukuntweza phezu kwamagagasi, bananaseyling, futhi i-volleyball yasolwandle. Ngaphandle elokugcina ngoba konke okunye kufanele ukhokhe ngokwehlukile. Kodwa amasevisi amathilomu kanye nemigoqo esisogwini lolwandle ingasetshenziswa mahhala.
Njengoba ubona, Oz Amahhotela Side Premium kuyavumelana ngokuphelele nalo esigabeni sayo, kodwa ukubona lokhu, kubalulekile ukubona yonke indawo, wathenga uhambo kule, ihhotela emangalisayo yesimanje. Njengoba sesihlale lapha, uyozizwa charm ngokuhlala kuleli hhotela futhi ngokuvamile eTurkey - kwelinye lamazwe wokungenisa izihambi iningi iMedithera.
Ihhotela Gelina Village Ihhotela Resort Spa 4 * (neCorfu, Greece) izithombe kanye nokubuyekeza
I-Hotel Prazeres Resort 3 * (Candolim, Goa, India): ukubuka konke, incazelo, izici nokubuyekeza
Ihhotela Basilica Holiday Resort 3 * (Cyprus): izithombe kanye izibuyekezo, inombolo amakamelo, inkonzo, indawo
Ihhotela e Ryazan 'Yard Esitebeleni ": abahambi Izibuyekezo
Aska Lara Deluxe 5 *. Ihhotela "Lara", Antalya
"Velvet Nezinkathi '-" Catherine "ikota. City Ihhotela "Velvet Nezinkathi 'Adler
"Amabhokisi inhlanhla" emidlalweni ye-Internet bese izimali zabo. Isehlukaniso noma iqiniso?
Pharmacopoeia - Iyini? Pharmacopoeia: incazelo, umlando, okuqukethwe
Izithombe zawo wonke umuntu ozithandayo apple pie ku kefir (iresiphi ongakhetha ezintathu ukupheka)
Sibutsetelo izinkinga ekubhekaneni umbuzo kanjani ukuthola nesivinini izifundo esikoleni mathematics ne-physics
"Denezhkin Stone" - Reserve Sverdlovsk esifundeni
Umculi, umbonisi, umxoxi nesazi-mlando Tasha Tudor: Biography, nobuciko kanye ezithakazelisayo amaqiniso